इस्लाम अनुयायीले बकरइदमा सद्भाव साटे
६ भदौ, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा बसोवास गर्दै आएका इस्लाम धर्मावलम्बीले दोस्रो ठूलो पर्व इद—उल—अजहा (बकरइद) का अवसरमा घण्टाघरस्थित नेपाली जामे मस्जिदमा आज भेला भई सद्भाव साटासाट गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष अरवीयन पात्रोको १२ औँ महिनाको १० गते पर्ने उक्त पर्वमा आफू भन्दा ज्येष्ठ मानिससँग आशीर्वाद लिने तथा मीठो खानेकुरा खाएर खुशियाली मनाईन्छ । […]
लाखेनाचको रौनक बढ्दै
६ भदौ, सङ्खुवासभा । परम्परादेखि सङ्खुवासभाको चैनपुरसँगै, खाँदबारी, खराङ, वानालगायतका ठाउँमा निकालिँदै आएको लाखेनाच यो वर्ष पनि नागपञ्चमीको आगमनसँगै लाखेनाच्नेको भीड देखिन थालेको छ । नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको चैनपुर बजारमा यस वर्षको लाखेनाच चैनपुर समाजसेवा युवा क्लबको विशेष आयोजनामा निकालिएको छ । चैनपुर मात्र नभएर नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको जिल्लाका अन्य बजार क्षेत्रमासमेत लाखेनाचको […]
बकरइदमा सामूहिक नमाज पाठ
६ भदौ, नेपालगञ्ज । इद—उल—अजहा (बकरइद) को अवसरमा बाँकेका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुले आज बिहान नेपालगञ्जस्थित इदगाहमा सामूहिक नमाज पाठ गरेका छन् । बकरइद पर्व इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको इदपछिको दोस्रो ठूलो पर्व हो । इदगाहमा नयाँ पहिरनमा उपस्थित इस्लाम धर्मावलम्बीहरुले बकरइद पर्वलाई आपसी भाइचारा, धार्मिक सहिष्णुता र एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले मनाएका छन् । नमाज पाठपछि त्यहाँ […]
बकर–इदले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने संकल्प पूरा गरोस्ः राष्ट्रपति भण्डारी
६ भदौ, काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बकर–इद (इदुल जोहा) पर्वले सामाजिक–आर्थिक विकासमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न सकोस् भनी सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज जारी गरेको शुुभकामना सन्देशमा सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक र जातीय विविधताबीच अनुपम सुदृढ एकता कायम रहेको हाम्रो देशमा सो पर्वले नेपालीबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, […]
वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा बकर इदको शुभकामना व्यक्त
६ भदौ, काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुस्लिम समुदायको महान् पर्व इद उल अजहा (बकर इद) का अवसरमा नेपाली मुस्लिम समुदायका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै बहुभाषा, जाति, धर्म, परम्परा र चाडपर्व रहेको नेपालमा […]
आज उत्साहका साथ प्रसिद्ध पर्व बकर–इद मनाइँदै
६ भदौ, पोखरा । इस्लाम धर्मावलम्बीले आफ्नो प्रसिद्ध पर्व बकर–इद आज उत्साहका साथ मनाइरहेका छन् । तीन दिनसम्म मनाइने यस पर्वलाई ‘इद–उल–जुहा’ पनि भन्ने गरिन्छ । यसलाई बलिदानीको पर्वका रुपमा लिइन्छ । इस्लाम महिना जुल हिज्जाको दशौँ दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ । बकर–इदका अवसरमा पोखराको इदगाहमा इस्लाम धर्मालम्बीले पवित्रताका साथ आज बिहानैदेखि भेला भई […]
समाभुख महराद्वारा बकर इदको शुभकामना
६ भदौ, काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले मुस्लिम धर्मावलम्बीको महान् पर्व बकर इद (इद उल जोहा) का अवसरमा देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण मुस्लिम धर्मावलम्बीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । सभामुख महराले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा बलिदानी र त्याग, समर्पण शान्ति, समृद्धि, भाव र सत्मार्गमा अगाडि बढ्न […]
झुलनोत्सवको रौनक सुरु
५ भदौ, महेन्द्रनगर, धनुषा । अहिले जनकपुरधामसहित सम्पूर्ण मिथिलाञ्चलमा यस्ता लोकगीत र लोक धुनसँगै झुलनोत्सवको रौनक प्रत्येक मठमन्दिरमा छाइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल तृतीयादेखि मनाइने झुलनोत्सव पर्वको रमझम यहाँ शुरु भइसकेको छ । मिथिलाञ्चलमा रोपाइँ सकिने बित्तिकै झुलनोत्सवको रौनक शुरु हुन्छ । यस क्रममा प्रत्येक मठमन्दिरमा कजरी र मलारजस्ता गीतको स्वरलहरी सुनिन्छ । गाउँले […]
शिक्षाका नाममा धर्म र संस्कृति बिथोलिनु हुदैन
४ भदौ, नेपालगञ्ज । “ पवित्र धर्मग्रन्थ कुरानले ज्ञानका लागि शिक्षा आर्जन र तालीम लिनुपर्ने कुरा सुझाए पनि हामी आफ्नो धर्म संस्कृतिमाथि अतिक्रमण हुने खालका शिक्षा ग्रहण गर्न कदापी तयार छैनौं ।” मुस्लिम धर्मगुरु एवं स्थानीय बरकतिया मदरसा विद्यालयका प्रधानाध्यापक मौलाना जियाउल मुस्तफा नूरानीको यो भनाइले मुस्लिम समुदाय शिक्षाप्रेमी भएपनि आप्mनो धर्मप्रति पनि उत्तिकै जागरुक […]
डेढ सय वर्षदेखि खलङ्गामा लाखे नाच
१ भदौ, जाजरकोट । इतिहास र सामाजिक परम्परासँग जोडिएको लाखे नाच शुरु भएको डेढ सय वर्ष पुगेको छ । जाजरकोटी राजा उपेन्द्रविक्रम शाहले आफ्नो मनोरञ्जनका लागि नेवार समुदायबाट लाखे नाच शुरु गराएका थिए । अहिले यो नाच जिल्लाका सबै समुदायको साझा सम्पत्ति जस्तै भएको छ । जाजरकोटका सबै समुदायका मानिसले यसलाई साझा पर्वका रूपमा लिन […]
सामूहिक रुपमा गुरही पर्व मनाउँदै
३१ साउन, कैलाली । पश्चिम नेपालका तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थारू समुदायले परापूर्वकालदेखि मनाउँदै आएको गुरही पर्व आज कैलालीका थारू समुदायले सामूहिक रुपमा मनाउँदै छन् । खेतीपाती सकिएपछि धानबालीमा किरा नलागून् भनेर गाउँका युवतीहरु गाउँभन्दा टाढाको चोकमा गई कपडाले बनाइएका स–साना गुरही (गाइने किराको प्रतीक) असराउने (सेलाउने) चलन रहिआएको थारू कल्याणकारिणीसभाका केन्द्रीय सदस्य इन्दिरा […]
अाज घरका मूलढोकामा नागको तस्वीर टाँसी नागपञ्चमी मनाइँदै
३१ साउन, काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नागपञ्चमी पर्व आज परम्पराअनुसार घरका मूलढोकामा नागको तस्वीर टाँसी पूजार्चना गरेर मनाइँदैछ । यसरी नागको तस्वीर टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिच्छीलगायत जीवले दुःख नदिनाका साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ । सूर्योदयकालमा पञ्चमी तिथि र […]
१५ हजारभन्दा बढी भक्तजन गोसाइँकुण्ड पुग्ने लक्ष्य
२९ साउन, रसुवा । यस वर्षको गोसाइँकुण्ड मेलामा १५ हजारभन्दा बढी भक्तजन आगमन हुने लक्ष्य राखिएको छ । मेला जनैपूर्णिमाका अवसरमा आगामी भदौ १० गते लाग्ने छ । नुवाकोटको बाटोमा सुधार आइसकेको र रसुवाको सडकमा आउनसक्ने पहिराको अवरोध हटाउन तीन स्काभेटरसहितको उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको छ । कतै पहिरो आइहाले एकाध घण्टामै व्यवस्थापन हुने रसुवाको […]
२७ साउन, काठमाडौँ । स्वयम्भूमा बुद्धको प्रार्थना गरी मनाइने एकमहीने गुँला पर्व आजदेखि शुरु भएको छ । गुँलाथ्व पारु (शुक्ल पक्षको प्रतिपदा) देखि शुरु भई यँलाथ्व पारुका दिन गुँला पर्व विधिवत् समापन हुन्छ । गुणले भरिपूर्ण महीना भएकाले यस पर्वलाई गुँला भनिएको हो । कसै कसैले नवौँ महीनामा आउने पर्व भएकाले गुँला भएको तर्क दिन्छन् । […]
२७ साउन, भक्तपुर । विशेषगरी बौद्ध धर्मावलम्बीले धुमधामका साथ मनाउने एक महिने गुँला पर्व आइतबारदेखि शुरु भएको छ । नेपाल संवत्को गुँलाथ्व पारुदेखि ञलाथ्व पारुसम्म एक महिना मनाइने गुँला पर्वका अवसरमा विभिन्न परम्परागत बाजागाजाका साथ बौद्ध चैत्यहरूको परिक्रमा गरिन्छ । गुँला पर्वको अवसरमा विशेषगरी नौँ बाजा बजाउने प्रचलन रहेको छ । गुँला पर्व विशेषगरी बौद्धमार्गीको […]
हप्ताको कुन बार कुन-कुन देवी-देवताको पुजा गरिन्छ?
हिन्दु धर्ममा, हप्ताको हरेक बारलाई देवी-देवताको बार मानिने गरिन्छ। विशेष व्रत र उपवास बाहेक, अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुई दिन सोहि बारअनुसारको देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन्। १. आइतबार हिन्दु धर्ममा आइतबारलाई ‘सूर्य देव‘को बार मानिन्छ। यस दिन व्रतालुहरूले एक छाक मात्र खाना खानुपर्दछ र खानामा नुनतेल मिसाउनुहुँदैन। व्रत बस्नेहरूले रातो […]
आदिवासी / जनजातिलाई कसरी बुझ्ने ?
आदिवासी जनजाति भन्नाले कुनै पनि ठाँउमा परा पूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका, आफ्ना छुुटै सामुहिक , सांस्कुतिक पहिचान भएका परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र, भाषा, धर्म, रितिरिवाज भएका तथा थुप्रै मौलिक पहिचान भएका समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनिन्छ । नेपाल १२७ बढी समुदाय बसोबास गर्ने बहुभाषिक, बहुधार्मिक , बहु सांस्किृतक र बहुजातीय लोकतान्त्रिक मुलुक हो ।आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान […]
शाक्यमुनी बुद्धका केहि मनन गर्नुपर्ने उपदेशहरु
शाक्यमुनी बुद्धका केहि मनन गर्नुपर्ने उपदेशहरु फूलको वास हावाको विपरित कहिल्यै जाँदैन तर मानवको सद्गुणको शुवास सबैतिर फेलिन्छ। तीन चीजहरुलाई लामो समय सम्म लुकाउन सकिदैन, सूर्य, चन्द्रमा र सत्य। ज़ार योद्धाहरुमा विजय पाउन सरलछ, तर आफै माथि विजय पाउँछ उहि साँच्चैं विजयी हो। हाम्रो कर्तव्य हो कि हामी आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राखौ, अन्यथा हामी आफ्नो […]
धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास हुँदै
२३ साउन, बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुर जिल्लाको सिमानामा रहेको भंगालास्थित निर्माणाधीन लटरम्बेश्वर महादेव मन्दिर परिसर धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास हुँदै गएको छ । विसं २०५९ बाट मन्दिरको निर्माण कार्य शुरु गरिएको सो ठाउँमा मन्दिरसँगै बाल उद्यान, वनभोज पार्क, वृद्धाश्रम, वृक्षरोपण र अन्य पार्क निर्माणका लागि काम अगाडि बढिरहेको लटरम्बेश्वर महादेव तथा संसारीदेवी मन्दिर संरक्षण उपभोक्ता […]
पशुपतिको भूउपयोगसहितको गुरुयोजना
२२ साउन, काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको भूउपयोग नीतिसहितको गुरुयोजना निर्माण गर्न नक्शांकन शुरु गरेको छ । नापी विभागको सहकार्यमा सो क्षेत्रको नापी गरी भूउपयोगसहितको गुरुयोजना निर्माण शुरु भएको कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । यसअघि मूल मन्दिर आसपासमात्र नापी गरी सीमाङ्कन भएको […]